श्रमिक व्यवसायी सहमति लागू हुन्छः प्रधानमन्त्री | गृहपृष्ठ
Home बजार श्रमिक व्यवसायी सहमति लागू हुन्छः प्रधानमन्त्री
श्रमिक व्यवसायी सहमति लागू हुन्छः प्रधानमन्त्री
चैत २१, काठमाडौं (अस)। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र ट्रेड युनियनहरूबीच चैत ९ गते भएको ११ बुँदे सहमति कार्यन्वयन गराउनका लागि सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन् । सोमवार राजधानीमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको ५८औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘श्रमिक र उद्योगीबीचको समस्या सामधान र औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि सरकार संवेदनशील छ’ प्रधानमन्त्री खनालले भने । श्रमिक र उद्योगी मिलेर औद्योगिक शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले राजनीतिक तरलताका कारण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताए । ‘हामीले राजनीतिक परिवर्तनहरू धेरै गर्यौं अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने पालो आएको छ’ मालाकारले भने । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रमुख एजेण्डामा अविलम्ब सहमति जुटाउनुपर्ने बताए । सरकारी नीति तथा कार्यन्वयनप्रति लगानीकर्ताहरू अझै विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै लगानी सुरक्षाको प्रत्यभूति दिलाउन उनले सरकार समक्ष आग्रह गरे ।
उक्त कार्यक्रममार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले महासङ्घ र ट्रेड युनियनहरूबीच भएको सहमति लागू गराउन सरकारसमक्ष आग्रह गरे । यस किसिमको सहमति औद्योगिक क्षेत्रका लागि लगानीको आधार भएकाले यसलाई अविलम्ब कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले ऊर्जा, श्रम तथा सुरक्षाको प्रत्यभूति गराएमा नेपालमा पर्याप्त स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रने उनले बताए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खनालले चेम्बरद्वारा प्रकाशित ‘ट्रेड डाइरेक्ट्री’ पुस्तक तथा सीडीको विमोचन गरेका थिए । त्यस्तै, कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएको भन्दै व्यवसायीहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मानपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो ।
सूर्य नेपालद्वारा विद्यालयलाई ५६ लाख
चैत २१, खैरेनीटार । सूर्य नेपालले यहाँ निर्माण गर्न लागेको कारखानानजिकैको विद्यालयलाई ५६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । तनहुँको खैरेनीटार गाविसस्थित शेराटारमा निर्माणाधीन कारखानानजिकैको कुश्मावती प्राथमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि ५६ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको हो । विद्यालयमा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सूर्य नेपालका सिनियर म्यानेजर रवि केसीले कम्पनीले स्थानीय विकासको गतिविधिमा समेत सहभागी हुने बताए । ‘विद्यालय भवन पुरानो भएकाले नयाँ निर्माणका लागि कम्पनीले सहयोग गर्ने भएको हो,’ उनले भने । प्रस्तावित विद्यालय भवन २ तला तथा १० कोठाको हुनेछ । भवनको नक्साङ्कन कार्य सकिएकाले निर्माण कार्य चाँडै थालिने केसीले बताए । विद्यालयको पुरानो भवन भत्काउने काम सकिएको विद्यालय पुनःनिर्माण समन्वय समितिका सदस्य बसन थापाले जानकारी दिए । ‘सूर्य नेपालले स्थानीयसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाए जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने । भवन बनाउने जिम्मा सूर्य नेपालको कारखाना निर्माणको ठेकेदार कम्पनी ज्वारचन कन्ष्ट्रक्शनलाई दिइएको छ । अहिले कारखाना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा चलिरहेको ज्वारचन कन्ष्ट्रक्शनका प्रोप्राइटर देवबहादुर ज्वारचनले बताए ।
एनसेलले शुरू गर्यो आगामी पुस्ताको प्रविधि
चैत २१, काठमाडौं (अस) । निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आगामी पुस्ताको प्रविधि शुरू गरेको छ । गत शुक्रवारदेखि प्रविधि शुरू गरिएको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइष्टिनेनले जानकारी दिए । टेलियासोनेरा समूहअन्तर्गत २० देशका दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये पहिलोपटक एनसेलमा यस्तो सेवा शुरू गरिएको हो ।
एनसेलका अनुसार गत हप्ताको अन्तिमसम्ममा पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन गर्ने काम पूरा भइसकेको छ । अहिले ४० लाख ग्राहकले एनसेलको सेवा लिइरहेका छन् । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेका ग्राहकका डाटा नयाँ प्रविधिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले शुरूमा रिचार्ज नहुने, फोन गर्दा समस्या देखिनेजस्ता सामान्य समस्या आएको उनले बताए । तर, केही दिनमै सबै प्रकारका समस्या हट्ने पासीले बताए ।
नयाँ प्रविधि शुरू गर्नका २ सय ५० जना विज्ञले काम गरेका थिए । यसका लागि ९ महीना खर्च भएको पासीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो प्रविधिमा ५० लाख कम्प्युटर तथा १ हजार ल्याटपबराबरको क्षमता रहेको छ । साथै, पाँच किलोमिटरको केबल पनि बिच्छयाइएको छ । ‘नयाँ प्रविधि निकै राम्रो छ’, उनले भने ‘यसबाट ग्राहकहरूले सहज रूपमा मोबाइल प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।’ त्यस्तै, आगामी दिनमा एनसेलले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई नयाँ उपहार दिने योजना बनाएको छ । तर, उपहारका बारेमा अझै यकिन नभएको एनसेलले बताएको छ ।
नयाँ वर्षको योजना ‘बजाज जे मन लाग्यो त्यै’
नयाँ वर्ष२०६८ को अवसरमा बजाज मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एचएच बजाजले आफ्नो नयाँ उपहार योजना ‘बजाज जे मन लाग्यो त्यै’ ल्याएको छ । यसअर्न्तगत ग्राहकले बजाजका कुनै पनि मोटरसाइकलको खरीदमा १० हजार रुपैयाँबराबरका साम्सुङ (हिम इलेक्ट्रोनिक्सअर्न्तगत ) का सामग्रीहरू सित्तैमा प्राप्त गर्नेछन् । बजाज जे मन लाग्यो त्यैअनुसार ग्राहकले बम्पर उपहार स्वरूप १० लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका साम्सुङका सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने एचएच बजाजले बताएको छ ।
यस्तो योजना एचएच बजाजका देशभरि रहेका ५० शोरूमहरूबाट लागू गरिनेछ । बजाज जे मन लाग्यो त्यै उपहार योजनाबाट ग्राहकले आफूले चाहेको जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री प्राप्त गर्ने अनुभूतिलाई पूरा गर्ने कम्पनीले बताएको छ । योजनाअनुसारको बम्पर उपहारका विजेताको घोषणा २०६८ असार महीनाको दोस्रो हप्ता गरिनेछ । भाग्यशाली विजेतालाई रू. १० लाखको भौचर प्रदान गरिने र सोहीअनुसार ग्राहकले साम्सुङका सामग्री प्राप्त गर्न सक्ने एचएच बजाजले बताएको छ ।
अरुण फाइनान्सले हकप्रद शेयर जारी गर्ने
अरुण फाइनान्सले तीन बराबर एक (३:१) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । फाइनान्सको चौधौं वार्षिक साधारणसभाले विशेष प्रस्तावका रूपमा हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारणसभाबाट सवसाधारण शेयरधनी समूहबाट सञ्चालकमा वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठ र विजय सिं सिजापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ई-कलेज प्रतिस्पर्धीद्वारा रक्तदान ई-कलेजका प्रतिस्पर्धीहरूले रक्तदान गरेका छन् । सिजन मिडियाको आयोजनामा यही चैत्र २५ गते मिस ई-कलेज २०११ प्रतियोगिता हुँदैछ । प्रतियोगीहरूले नेपाल रेडक्रसको भवन भृकुटीमण्डपमा रक्तदान गरेका थिए । कार्यक्रममा १६ जना प्रतिस्पर्धी सहभागी छन् ।
गोयनका सिमेण्टलाई आईएसओ प्रमाणपत्र
बजारमा आएको ४ महीनामै गोयनका सिमेण्टले आईएसओ ९००१ : २००८ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । गोयनका समूहद्वारा उत्पादित गोयनका सिमेण्टको विक्री गर्दै आएका नारायणघाटदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका विक्रेताहरूको भेला शनिवार भैरहवामा सम्पन्न भएको छ । भेलामा समूहका अध्यक्ष नन्दलाल गोयनकाले सहभागीहरूलाई सिमेण्टले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिएका थिए ।
कम्पनीबाट उत्पादित गोयनका ब्राण्ड पीपीसी सिमेण्टले छोटो समयमै आईएसओ प्रमाणपत्र पाउनुले गुणस्तरलाई प्रमाणित गरेको गोयनकाले भेलामा बताए । भेलामा समूहका निर्देशक अरुणकुमार अग्रवालले पहिलोपटक यस क्षेत्रमा प्रदूषणरहित क्लोज सर्किट मिलबाट सिमेण्ट उत्पादन भइरहेको र छिट्टै गोयनका गोल्ड ब्राण्ड ओपीसी ४३ र ५३ ग्रेड का सिमेण्ट उत्पादन हुने बताए । भेलामा नारायणघाटका साथै लुम्बिनी, राप्ती, भेरी, महाकालीलगायतका १ सयभन्दा बढी गोयनका सिमेण्टका विक्रेताहरू सहभागी थिए ।
पोखरीको जीर्णोद्धारमा जर्मनी र अमेरिकि सहयोग
जर्मनी र अमेरिकाले पाटन राजदरबारमा अवस्थित दुई वास्तुकला परियोजना तुसाहिटी र भण्डारखाल पोखरीको जीर्णोद्धारका लागि सहयोग गरेका छन् । जर्मन राजदूत भेरेना ग्राफिन भन रोर्डन र अमेरिकी राजदूत स्कट एच डिलिसीले सोमवार संयुक्त रूपमा जीर्णोद्धारको उद्घाटन गरे । १७औं शताब्दीको वास्तुकलाको सुन्दर उदाहरणका रूपमा रहेका तुसाहिटी र भण्डारखाल पोखरी मल्ल राजाहरूको उत्कृष्ट कलात्मक सम्पदामध्ये पर्छन् । मूर्तिकलाको जीर्णोद्धार काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषको समस्त दरबार क्षेत्र संरक्षण गर्ने प्रयासको एक हिस्साका रूपमा रहेको छ । सन् २०१२ मा जनसमुदायका लागि दरबार क्षेत्र भित्रका चोक, उद्यान र अन्य स्थलहरू पुनः खुला गरिनेछन् ।
जर्मन सरकारले काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषद्वारा सन् २००८ देखि २०१० सम्म सञ्चालित संरक्षण र जीर्णोद्धारका कार्यहरूको सहयोगका लागि १ करोड १६ लाखबराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकी सरकारले यस वास्तुकलाको पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि एम्बेसेडर्स फण्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेशनमार्फत काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषलाई करीब ६० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको थियो । विगत ९ वर्षमा अमेरिकी सरकारले नेपालका सांस्कृतिक स्थलहरूको जीर्णोद्धार र संरक्षणका लागि करीब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिसकेको छ ।
मालिकाको ११औं वार्षिक साधारणसभा
मालिका विकास बैङ्कको ११ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । बैङ्कले आफ्ना शेयर धनीहरूलाई झण्डै सवा २ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सोमवार धनगढीमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले लाभांशको निर्णयाई पारित गरेको हो । साधारणसभाले सञ्चालकहरूका लागि रू. १० लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि गर्ने निर्णयगरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशकुमार केसीले आर्थिक अभियानलाई बताए । साधारणसभाले भविष्यमा अनुकूल भए अन्य विकास बैङ्कहरूसँग मर्जरका लागि आवश्यक छलफल गर्न सकिनेसमेत निर्णयगरेको छ । बैङ्कको आफ्नो पूँजी वृद्धि गरेर वा अन्य बैङ्कहरूसँग मर्जरमा गएर भए पनि राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्क बनाउने लक्ष्य रहेको कार्यकारी अधिकृत केसीले जानकारी दिए ।
इण्टरनेशनलको निक्षेप बीमा
इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबीच निक्षेप बीमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिकाअनुसार बैङ्कले निगमसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापत्रमा इण्टरनेशनल डेभलपमेण्ट बैङ्कका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजाराम खड्का र निगमका तर्फबाट महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद शर्मा अधिकारीले सोमवार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विजय मोटर्सको एक्सचेञ्ज मेला
जनरल मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता विजय मोटर्स प्रालिले दुईदिने एक्सचेञ्ज मेला सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले चैत १९ र २० गते नक्सालमा एक्सचेञ्ज मेला सम्पन्न गरेको हो । ‘ड्राइभ इन योर ओल्ड ड्राइभ आउट एण्ड इण्टु द न्यू इअर विथ अ ब्राण्ड न्यू सेभ्रोले’ भन्ने नाराका साथ एक्सचेञ्ज मेला आयोजना भएको हो । मेलामा ग्राहकको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको कम्पनीले बताएको छ । मेलाको पार्टनरमा सानिमा विकास बैङ्क र कुमारी अटो सेण्टर रहेका थिए । एक्सचेञ्जमा पुरानो गाडीसँग नयाँ सेभे्रलेबिट र सुबारू गाडी साट्न पाउने व्यवस्था थियो । मेलामा रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
डा. ज्योतिलाई विशिष्ट विद्यार्थी अवार्ड
ज्योति समूहका उपाध्यक्ष डा.रूप ज्योतिलाई आईआईटी बम्बेले विशिष्ट विद्यार्थी अवार्डद्वारा विभूषित गरेको छ । डा.ज्योतिले सन् १९७० आईआईटी बम्बेबाट केमिकल इञ्जिनीयरिङमा बिटेकको अध्ययनपश्चात् सन् १९७६ महारवर्ड बिजनेश स्कूलबाट एमबीए, सन् १९८५ महारवर्ड केनेडी स्कूल अफ गभर्नमेण्टबाट एमपीए र हर्वर्ड विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक अर्थशास्त्र र राज्य सत्ता विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् ।